डा. राजेन्द्र कोजु - कान्तिपुर समाचार
सुर्ती छाड्नुस् है !
बायाँ हत्केलामा दायाँ हातको बुढीऔंला नाच्दै छ, सुकेको सुर्तीको पातसँग सेतो चुना राम्ररी मिलाउन । मोल्दै गएपछि चुना र सुर्तीको धूलो पनि निस्किन्छ । धूलो चपाइँदैन ।
हजुरले जति फुर्ती गरे ’नि सबैले मान्ने त मलाई नै हो, देखिसिनुहुन्न, भोजभतेरमा मेरो उपस्थिति कति हुन्छ ? कसैले ह्विस्की, कसैले वाइन, कसैले बियर भन्दै पिउने मलाई नै हो । त्यत्रो जमघट हुने भोजमा हजुरको आवश्यकतै मान्दैनन्,’ रक्सी गज्जक्क फुल्दै बोले । तरर ताली बज्यो ।
‘ए गुलियो, आज त तेरो चुरीफुरी निक्कै छ त, कुरो के हो ?’‘हुन्न त चुरीफुरी ? मैले मिठो पारिदिएको खानेकुराको स्वाद आजको भोजमा सबैले लिने भए, त्यसैले ।’‘तँलाई त लास्टमा खान्छ । यहाँ त मेरो प्रयोग पो बेसी छ त ।’
‘तपाईको खाना मिठो भएन ? कि खल्लो भयो ? सायद म नभएको हुनाले होला । म स्वादिलो पारिदिन्छु, तपाईंको खाना ।’
उच्च रक्तचापबाट जोगिने तरिका
हिजोआज उच्च रक्तचापबारे धेरैजसोलाई केही न केही जानकारी भएकै छ । तथापि उच्च रक्तचापबारे थप केही जानकारी प्रस्ट गर्न कोसिस गरेको छु । उच्च रक्तचाप ठेट नेपाली शब्द भए पनि धेरै जसोले ‘हाइ ब्लड प्रेसर’ वा ‘प्रेसर’ भयो भनेर बुझ्ने पनि छन् ।
डा. राजेन्द्र कोजुका लेखहरु :
‘प्लस टु’ पछि चिकित्सा क्षेत्रको पढाइ कसरी ?
प्लस टु पढिसक्नासाथ हरेक युवामा तुरुन्तै प्रश्न उठ्छ– अब मेरो शैक्षिक बाटो के हो ? प्लस टुका विषय हेरी–हेरी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम फरक पर्न सक्छन् ।
चैत्र २४, २०७३